Hamonjeko ny sasany Euros Ary raiso Lamasinina Ary Travel Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Hamonjeko ny sasany Euros Ary raiso Lamasinina Ary Travel Europe
Nandritra ny lasa 10 taona, an-tapitrisany efa nokasaiko ny fomba mahasoa dia ny handray ny fiaran-dalamby! Rich saha ny maitso, morontsiraka mamiratra, sy ny tendrombohitra madio vatohara tsy voatonona velively amin'ny brochure na bilaogy momba ny dia. Mahafinaritra ny mandeha lamasinina, mety, ary fomba fitadiavam-bola avy amin'ny teboka A mankany amin'ny teboka B, Tsy mino izany in-droa, handray ny fiaran-dalamby!
Ny zavatra lehibe faharoa momba ny fiaran-dalamby any Eoropa ary amin'ny ankapobeny dia ny fomba mety hahalalan'izy ireo teti-bola. Tsy vitan'ny no maro be ny levitra toerana azo isafidianana, fa koa fomba maro tsy voatanisa mba hikapa amin'ny ankapobeny saran-dàlana. Koa raha naniry mafy ianao mba namely ny lalamby indraindray tsy ho ela, Ireto misy toro-hevitra lehibe vitsivitsy hampiasa:
Maka fotoana ve ny Research sy Planning eo anatrehanao handray ny fiaran-dalamby
Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra rehefa maka fiaran-dalamby, dia afaka ho tena avy amin'ny tapakila(S) amin'ny haingana an-tserasera fikarohana. Boky ny tapakila mialoha raha azo atao. Jereo inona no fotoam-taona ny tapakila vidin dia ambany indrindra, ary ho azo antoka ianao eo amin'ny handrandraiko ho an 'ireo fihenam-bidy. matetika, ny firenena rehetra dia hanana karazana safidy mora azo tapakila fividianana. Noho izany, hanao ny fikarohana! Vakio ny alalan 'izany bilaogy ho tonga bebe kokoa tsara ny safidy isan-karazany.
Montpellier ho any Toulouse Lamasinina
Marseille ho any Toulouse Lamasinina
Rehefa Makà Train, Travel amin'ny alina
Na ianao mpianatra mahay mandeha amin'ny dia na mpitsangatsangana mahazatra mandray ny lamasinina isan'andro, matory eo amin'ny fiaran-dalamby mety afaka nikapa ny vola lany amin'ny zavatra ilaina eo amin'ny efa ho ny antsasaky. Tena fomba tsy mampino ihany koa mba hamonjy ny fotoana rehefa resin-tory tao amin'ny tanàna iray, ary hifoha hafa. Rehefa avy nilaza fa, zava-dehibe ny mahatakatra ny karazana trano alina fiaran-dalamby.
Ny tsara indrindra dia fiarandalamby izay manana efitrefitra. Ny toerana dia azo hangalana miaraka Rehefa raisinareo ny fiaran-dalamby mba hanangana fandriana miaraka ny lay ho an'ny fiainana manokana. Next dia couchettes, ny mora indrindra sy miely patrana indrindra safidy. Ireo efitra efa-dahy ny enina bunks ary unisex, ka tsy maintsy sorona ny fiainany manokana somary. Ny farany lafo indrindra sy ny safidy no natory. Dia izy no mampahazo aina kokoa sy tsy miankina, rehetra ny safidy mbola mora kokoa noho ny efitra fandraisam-bahiny.
Copenhagen ho any Vienne Lamasinina
Vonjeo ny Sakafo sy zava-pisotro sy Raiso Lamasinina
Fonosana sakafo manokana dia amin'ny alalan'ny lavitra mora indrindra fomba fanaovana ilay izy. Tsy toy ny fitsangatsanganana mahazatra amin'ny bus na fiara, rehefa maka fiaran-dalamby raha ny marina dia afaka mihinana aina. Ny ankamaroan'ny seza manana fihoaram--avy latabatra na raikitra latabatra teo anelanelan'ny toerana roa. Na izany aza, raha tsy maintsy hividy ny sakafo ary ny zava-pisotro mandritra ny diany, fa maninona. Ny sakafo eo amin'ny fiaran-dalamby tsy pricey loatra ary matetika no afaka mampihatra ny karatra izay manome fihenam-bidy.
Bordeaux ho Nantes Lamasinina
Lyon ho Nantes Lamasinina
Marseilles ho Nantes Lamasinina
Mieritreritra ho amin'izay haleha lamasinina dia afaka manampy anao ho tena avy amin'ny tahirim-bola Travel! Nahita tsara fifandraisana matetika mety ho Mora kokoa noho ny misambotra ny fiaramanidina, ary aina kokoa noho ny mandeha fiara. Makà lamasinina ho an'ny tsy manam-paharoa traikefa izay azo antoka fa hanatsara ny vakansy manontolo!
Ento A Train ho Vonjeo-A-Train, fidio ny alehanao, ary raiso ny lamasinina any amin'ny toerana rehetra any Eropa amin'ny vidiny mora indrindra eny an-tsena! ary, hainao? Rehefa mahazo ny lamasinina tapakila amin'ny Save A Train, Ny famandrihana dingana atao ao anatin'ny 3 minitra, toy izany entana ny kitapo sy mankafy ny zava-drehetra izay manaraka!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftake-train-europe%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#lalan-alina #traveleurope fiaran-dalamby Travel torohevitra traveltips